June 15 Zodiac - roscodị Horoscope zuru ezu - Akara Zodiac
Isi Akara Zodiac June 15 Zodiac bụ Gemini - Hodị Horoscope zuru ezu
June 15 Zodiac bụ Gemini - Hodị Horoscope zuru ezu
Ihe akara zodiac maka June 15 bụ Gemini.
Akara Astrological: Mụ ejima . Nke a na-egosipụta duality na ikike dị n'otu maka otu echiche ahụ. Ọ na-emetụta ndị a mụrụ n'etiti May 21 na June 20 mgbe Sun dị na Gemini, akara zodiac nke atọ na akara ngosi mmadụ mbụ nke horoscope.
Na Gemini Constellation na kpakpando kacha egbuke egbuke bụ Pollux gbasaa na ogo 514 dị n'etiti Taurus na West na Cancer to East. Igwe latitude ndị a na-ahụ anya bụ + 90 Celsius na -60 Celsius, nke a bụ naanị otu n'ime kpakpando iri na abụọ nke zodiac.
A na - akpọ Twins ahụ n’asụsụ Latin dị ka Gemini, n’asụsụ Spanish dị ka Geminis ebe French na - akpọ ya Gémeaux.
Ihe omuma ndi ozo: Sagittarius. Na ịgụ kpakpando, ndị a bụ ihe ịrịba ama etinyebere na zodiac gburugburu ma ọ bụ na wiilị na n'ihe gbasara Gemini ịtụgharị uche na idebe na ọchị.
Modality: Ekwentị. Na-egosi etu ịnụ ọkụ n'obi na ịdị mma dị na ndụ nke ndị amụrụ na June 15 na otu ọmịiko n'ozuzu ha.
Ulinglọ ụlọ: Lọ nke atọ . Thislọ a na-achịkwa nkwukọrịta niile, mmekọrịta mmadụ na njem. Dị ka ụlọ ha, ụmụ nwanyị na-enwe mmasị ikwu okwu, izute ndị ọhụụ ma gbasaa mbara igwe ha. Ma n'ezie, ọ dịghị mgbe ha na-ajụ ụdị ọ bụla nke ohere njem.
Isi na-achị: Ebere . Wa a gosipụtara obi ike na uche sara mbara. Ọ na-atụ arokwa okwu okwu. Mercury na-ewe ụbọchị iri asatọ na asatọ ka ọ gafere anyanwụ kpam kpam, na -enwe oke ịgba ọsọ.
Mmewere: Ikuku . Nke a bụ mmeghari nke mmegharị na mmetụta uche nke na-erite uru maka ndị amụrụ n'okpuru akara zodiac nke June 15. Ọ na-egosi onye nwere udo ma na-agbanwe agbanwe nke na-ejikọkarị ndị mmadụ ọnụ.
Bọchị obi ụtọ: Wenezde . N'okpuru ọchịchị nke Mercury, ụbọchị a na-ese onyinyo azụmahịa na amamihe. Ọ bụ aro maka ụmụ amaala Gemini ndị megharịrị anya.
Nọmba na-atọ ụtọ: 3, 5, 10, 15, 20.
Motto: 'Echere m!'
Ozi ndi ozo na June 15 Zodiac n'okpuru ▼
Disemba 23 daysbọchị ọmụmụ
Nwoke Capricorn nọ n'ihe ndina: Ihe ị ga-atụ anya ya na otu esi agbanye ya
cancer sun scorpio ọnwa nwoke na ịhụnanya
jupiti n'ụlọ iri na otu
ndakọrịta libra na Taurus ọbụbụenyi
june 24 zodiac sign ndakọrịta
ihe horoscope bụ February 14
sag nwanyi na nwoke cancer